ENYELA GỌỌMENTI ETITI IWU, KA Ọ TỌRAPỤ ỤMỤ BIAFRA EJI EJI – hoo!haa!!
ENYELA GỌỌMENTI ETITI IWU, KA Ọ TỌRAPỤ ỤMỤ BIAFRA EJI EJI
Onye ndu otu ahụ na-achọ nnwere onwe Biafra akpọrọ ‘Biafra Zionist Federation, BZF, n’aha nkenke bụ Benjamin Ọnwụka enyela gọọmenti etiti otu izu ụka, ka ọ hapụ ka ha ra bụ ndi ọ na-anụ ọkụ n’obi iwube mba Biafra, bụ ndi eji eji ugbua n’ụlọ mkpọrọ dị iche iche n’ala anyị.
Ọnwụka bụ onye kwuru ihe ndi a ụnyahụ bụ Monde, sịrị na nke a bụ ime ka ndi a sonye n’ọgbakọ ha ga-enwe ma ọnwa Ọgọọst dị na ụbọchị iri abụọ maka iwubegharị mba Biafra.
Ọnwụka gara n’ihu dọọ ndi kọmishiọn na-alụso mpụ n’aghụghọ ọgụ, ka ha kwụsị ịchụgharị na isogbu osote onye isi ụlọ omebe iwu sineti bụ Ike Ekweremadụ nakwa ndi aka na-achị steeti Akwa Ibom na nke Benue bụ Imanuel Udọm na Samel Ọtọm n’otu n’otu.
Nwoke a ji aka ya mee onwe ya onye nzọpụta ndi eji eji, ekwuela na onweghi ya ila-azụ n’atụmatụ nke ọgbakọ iwube Biafra. Ọ gwara gọọmenti ka ọ gharakwa igbuwanye oge n’ịtọrapụ ndi niile oji eji bụ ndi na-eti mkpu maka Biafra inwere onwe ya; na-agbanyeghị otu nke onye ọbụla nọ na-eti mkpu nke ya, dịka MASSOB, IPOB, BNG nakwa otu ndi ọzọga.
Ọ sịrị na-aga-ahapụrịrị ndi a eji eji ka ha bịa sonyere ha na ime ihe ha chọrọ ime. O kwuru na-aga-ahapụrịrị ha tupu abalị iri abụọ nke Ọnwa Ọgọọst.
Ọnwụka kwukwara na gọọmenti Buhahri ekwesịghị isi n’aka ndi EFCC na-emechị ebe ntinye ego n’ụlọ ọba ego nke gọọmenti steeti ọbụla ewubere site na ntụli aka. Ọ jụrụ, keduziṅ ụzọ atụrụ anya na gọọmenti steeti dị etu a ga-esi mee mkpa nakwa ọrụ dịrị ya?
N’okwu ya, “anyị na-ekwugide mmegbu ana-emegbu steeti Benue na nke Akwa Ibom naanị maka na ha bụ nke ndi Biafra. Ọ sịrị na-aga hapụ steeti ndi a aka ka ha were ego ha mere mkpa ha. O kwukwara na ha anụla kepu kepu na-ana-achọ imechikwu ebe ndebe ego nke steeti Rivas maka ihi onye ochịchị ya bụ Wike. Ọ sị na nke a agaghị eme eme.
N’okwu ya, n’ime izu ụka atọ gara aga, ka ndi EFCC si akpagbu onye osote ụlọ omebe iwu sineti naanị maka na ọ bụ onye Biafra. Ọ sịrị, na-ana-adụ ya aka n’akụkụ niile, ka ọ gbaa arụkwaghị m. Ọ kwuru na nke a bụ mmegbu ma bụrụkwa ihe iche aka mgba nye ha.
Ọnwụka gara n’ihu kwue na mgbe Bukọla Saraki bụ aka na-achị steeti, na o riru ego mana onweghị onye tụpụrụ ya ọnụ, mana ana-achụgharị Ekweremadụ bụ onye ejibeghị ọkwa dịka onye isi nke ọchịchị. O kwuru na maka nke a, ka ha ga-eji were Biafra na-aga n’ihu.
Ọnwụka kwuru na ha ji anya okenye ji ele ihe dị n’ime akpa were ele ihe gọọmenti ga-eme n’okwu gbasara Lawal Daura bụbu onye isi ndi nche akpọrọ DSS, ma bụrụkwa onye-ekwuru na o zopuru ego dị njeri naira iri abụọ na otu n’ime ụlọ ya, tinyekwara ngwa agha na akwụkwọ ikike ntuli aka. Ọ jụrụ sị kedu ihe ndi EFCC ka na-eche maka nke a? Jụkwa sị kedu ihe ụlọ ọrụ onye isi ala na-ekwu maka nke a?
Ọ sịrị na mkpagbu nakwa ịzọdo ụkwụ n’isi a, n’ụdị na ana-alụso mpụ na aghụghọ ọgụ ga-akwụsị. Ọ sị na mmegbu ndi a ga-akwụsị ma ọnwa Ọgọọst dị n’abalị iri abụọ na otu.
Ọnwụka kpọkuru ụmụ akwụkwọ ka ha nuputa n’igwe bia kwado otu ha, ebe ọbụ na ha enweghị olile anya n’ime Naijiria.
Ọ sịrị na ha mara ụdịrị mbọ ụmụ akwụkwọ gbara n’afọ 1967 mgbe Ojukwu kewapụtara Biafra na Nsụka.
Ọ sịrị na ewubere Biafra site na nkwado nke ụmụ akwụkwọ na ụmụ na-eto eto nyere Ikemba Ọdụmegwu Ojukwu lagoro mụọ. Ọ kpọkuru ha ka ha kpakwa ụdị ike ahụ n’afọ 2018.
“Anyị chọrọ ikwụsị iji ala anyị mere ebe ana-egbu ndi mmadụ dịka o si dị n’ọchịchị Muhamladu Buhari, site na iji ndi nche ehi lụso anyị ọgụ”.
Ọnwụka kwuputara nwute ya n’ihi na ndi ndu ụka anaghị akwado Biafra na-agbanyeghị ogbugbu ana-egbu ndi ụka nakwa ọkụ ana-agba ebe okpukpere ha dịṅ iche iche… Ọ kpọkuru ndi ụka, ka ha bịa kwado mbọ ha na-agba, maka na ihe ndi a, na-eme ugbu a, metụtara onye ọbụla. Ọ sị na ihe ha chọrọ bụ nkwado mba Amịrịka na nke mba Izrel. N’ikpe azụ ọ sịri na “anyị enwetela nkwado ndi a”.
Previous Post: Bishọọpụ a sị lụrụ nwanyị abụọ ebutewo nsogbu n’ụka
Next Post: ÉGWÚ ÉKÉ, AGBA NKE ATỌ NA-ABỊA NSO